Home Wararka Hogaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta Mudulood oo maanta ku kulmay Muqadishu (Sawiro)
Hogaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta Mudulood oo maanta ku kulmay Muqadishu (Sawiro)
Waxaa maantay ku kulmay magaalada Muqadishu Xildhibaanada iyo Sanators beesha Mudulood ku metela labada (2) gole ee DFS. Kulankan oo ay soo qaban-qaabiyeen siyaasiyiinta wuxuu ka dhacey Doorbin Hotel ee magaalada Muqdisho.
Kulankaas waxaa ka soo qeyb galay Siyaasiin cug-caddaa ah, iyadoo qaarkoodna ay dalka ka soo qabtaan xilalka ugu sarreeya sida Madaxweynihii hore Md. Hassan Sh. Mohamud, Madaxweynihii hore Md. Ali Mahdi Mohamed, Ra’iisul Wasaarihii hore Nur Hassan Hussein (Nur Cadde), Duqii hore ee gobalka banaadir Ali Ugas Abdulle, Sanators, Xildhibaano, Xildhibaano hore, Duqii hore ee Muqdisho Sheikh Yusuf ( Madaale) Duqii hore ee Muqdisho Gen. Muungab, Duqii hore ee Muqdisho Adde Gabow, Aqoonyahanno, Ganacsato, Haween iyo shaqsiyaad bulshada dhex-deeda sumcad ku leh.
Ugu horreyntii waxaa kulanka ku furay Aayadaha Qur’aanka iyo soo dhoweyn Sanator Mohamed Amiin. Xildhibaan Abdulqaadir Ossoble Ali ayaa halkaas ka jeediyey xog-warranyo soo jiitay ka soo qeyb galayaashii kulankaas, sidoo kale Xildhibaanad Drs. Muna Hassan Shibis ayaa iyaduna halkaas ka jeedisay khudbad meelo badan taabaneysay, Sanator Xaaji Muuse Suudi Yalahow ayaa’asana kulankaas ka jeediyey khudbad loo wada ilka caddeeyey.
Waxaa xusid mudan in kulankaas lagu cambaareeye shaqsiyaad ka soo jeeda beesha oo ku qaraabta magaca beesha balse aanan qadirin sida ay laga maar-maan u dowlad loo wada siman yahay.
Kulankaan ayaa waxa uu hordhac u yahay kulamo badan oo lagu qaban doono dalka dibadiisa iyo gudahiisa kaas oo ay ka soo qayb-gali doonaan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo culumaa’udiinka. Hogaanka Mudulood ayaa ku baaqay in la dhowro dowladnimada isla markaana aan marnaba la xadgudbin xuquuqda qofka Soomaaliga ah. Waxaa kaloo la isla gartay in aan la xaqiijiyo in aad Soomaaliya dib loogu celin meeshii ay ka timid.
Ugu danbeyntii waxaa kulanka soo xirey Md. Hassan Sheikh Mohamoud asagoo ku baaqay deganaasho iyo kulamo danbe
[su_carousel source=”media: 338706,338706,338705,338704,338703,338702,338701,338699,338700,338698,338697,338696″ height=”840″ items=”1″]